Grasitra fanosorana fotokevitra fototra
Fantaro raha azo ampiasaina indray ny bearings
Raha hitsara raha azo ampiasaina indray ny fiterahana, dia tokony ho tapaka aorian'ny fiheverana ny haavon'ny fahasimbana mitondra, ny fahombiazan'ny masinina, ny maha-zava-dehibe azy, ny toe-javatra iasana, ny tsingerin'ny fizahana, sns. fepetra, ny cont ...
Fetibe Tranditional sinoa -Filazana fialantsasatra momba ny fialantsasatra an-tsambo
Ahoana ny fomba hisorohana ny vidiny miafina amin'ny alàlan'ny fampiasana bearings.
Satria ny orinasa indostrialy dia mitady hamonjy vola amin'ny rafitra sy zavamaniry ao aminy, ny iray amin'ireo hetsika lehibe indrindra tokony hataon'ny mpanamboatra dia ny fandinihana ny vola lany amin'ny fananana (TCO) an'ireo singa ao aminy. Ato amin'ity lahatsoratra ity, no manazava ny fomba fiantohana io kajy io mba hisorohana ny injeniera amin'ny vidiny miafina ...
Nanazava ny fandeferana milanja baolina
Nanazava ny fandeferana amin'ny fandefasana baolina Fantatrao ve azonao ny fandeferana sy ny tena dikan'izany? Raha tsy izany dia tsy irery ianao. Ireo dia matetika voatonona nefa matetika tsy misy tena fahazoana ny tiany holazaina. Ireo tranonkala manana fanazavana tsotra momba ny fandeferana dia tena tsy fahita firy ka nanapa-kevitra izahay ...
Torohevitra folo ho an'ny fikojakojana fitondra-tena tsara.
Inona no itovizan'ny famantaranandro, ny skateboards ary ny milina indostrialy? Izy rehetra dia miankina amin'ny bearings mba hitazomana ny fivezivezena mihodina. Na izany aza, mba hahatratrarana ny fahamendrehana dia tsy maintsy tazonina sy tantanana tsara izy ireo. Izany dia hiantoka ny androm-piainana maharitra, hisorohana ny olana iraisana ...
Fahasimbana amin'ny mavesatra / maodelin'ny fifandraisana RCA: dian-tongotra mahazatra DGBB
Ny dian-tongotra mahazatra amin'ny bearings Ball Groove Deep (A) dia mampiseho ny làlan'ny hazakazaka mahazatra indrindra rehefa mihodina eo ambanin'ny enta-mavesatra fotsiny ny peratra anatiny. (E) hatramin'ny (H) dia mampiseho ny dian-tongotra samy hafa izay miteraka fiainana fohy noho ny fiatraikany ratsy amin'ny bearings. (A) Rotati peratra ...
Namoaka fanambaràna andro vitsivitsy lasa izay ny fitantanan-ketra ao amin'ny Fanjakana Shinoa, mety hiakatra indray ny vidin'ny akora !!
Vao haingana ny fitondram-panjakana misahana ny fitakiana hetra any Sina no namoaka fanambarana momba ny fanafoanana ny trakan-ketra fanondranana ho an'ny vokatra vy sasany. Ity fepetra ity dia mety hiteraka fiakaran'ny akora mahazatra. Ny mpanjifa izay manana drafitra fividianana vao haingana dia asaina miomana aloha. Angamba ny vidin'ny ma manta ...
Fisafidianana bearing Rolling - Jereo ny sary lehibe kokoa
Rehefa mandray ny tsingerin'ny fiainana manontolo fa miantoka ny vidin'ny fividianana irery, ireo mpampiasa farany dia afaka manangom-bola amin'ny alàlan'ny fanapaha-kevitra amin'ny fampiasana bearings mihodina avo lenta. Rolling bearings dia singa manan-danja amin'ny fihodinana zavamaniry, milina ary fitaovana, ao anatin'izany ny fitaovana milina, mandeha ho azy syst fitantanana ...
Sahirana daholo ve ny fahasimbana ety ambonin'ny tany? Fiadiana amin'ny harafesina amin'ny dingana famolavolana
Hatramin'ny 40 isan-jaton'ny voly legioma iray dia mety ho very maina noho ny filan'ny hatsikana sasany. Raha ny legioma miharo volo dia mety tsy dia mahafinaritra indrindra amin'ny maso, dia manana sanda ara-tsakafo mitovy amin'ny mitovy aminy mifanitsy aminy. Ny fahasimbana eo amin'ny sehatra dia afaka mitaky ...
Fomba hanitarana ny fiainana serivisy ho an'ny fampiharana haingam-pandeha
Ny akanjo sy rovitra dia mitranga ara-dalàna rehefa mandeha ny fotoana. Ho an'ireo ampahany ampiasaina amin'ny fampiharana haingam-pandeha, ny voka-dratsy ateraky ny faharerahana sy ny rovitra dia mety ho lasa olana lehibe aloha kokoa. Ny fampiharana haingam-pandeha dia miteraka olana roa ho an'ny fiadananao: hafanana sy fikorontanana bebe kokoa. Tsy misy p ...
Ahoana ny fomba hisafidianana ny maha-marina ny fiterahana?
Fepetra takiana ohatra Famaritana azo ampiharina azo ampiharina Ny vatan'ny fametrahana dia takiana mba hanana fahadiovana avo lenta Audio spindle (audio recorder, tape recorder) Radar, shaft antena parabolic Machine tool spindle Computer electronics, disk spindle Aluminium foi ...
Manohitra ny hafanana sy ny tsindry - mitondra famolavolana ho an'ny fahamendrehana amin'ny tontolo iainana tafahoatra.
Ny fitomboan'ny fangatahana hanatsarana ny fahamendrehana amin'ny indostria dia midika fa tokony handinika ny singa rehetra amin'ny fitaovany ireo injeniera. Ny rafi-pitondrana dia ampahany lehibe amin'ny milina ary ny tsy fahombiazany dia mety hisy vokany mahatsiravina sy lafo. Ny famolavolana mitondra dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fahamendrehana, ...